आइपीएलका लागि दिल्लीले रिटेन ग¥यो सन्दीप लामिछाने! | नेपाली पब्लिक आइपीएलका लागि दिल्लीले रिटेन ग¥यो सन्दीप लामिछाने! | नेपाली पब्लिक
नेपाली पब्लिक २०७६, २९ कार्तिक शुक्रबार १८:२८
एजेन्सी– इन्डियन प्रिमियर लिग(आइपीएल) २०२० का लागि दिल्ली क्यापिटलले नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछानेलाई रिटेन गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिगमा दिल्ली डेयरडेभिल्स (हालको दिल्ली क्यापिटल)बाट करियरकाे शुरुवात गरेका सन्दीप यससँगै तेस्रो पटक दिल्लीबाट खेल्ने भएका हुन्।
सन् २०१८ आइपीएल दिल्लीबाट खेलेका सन्दीपको दिल्लीसँग ३ वर्षको सम्झौता थियो। उनी त्यसबेला २० लाख भारुमा दिल्लीमा अनुबन्धित भएका थिए। दिल्लीले रिटेन गरेसँगै सन्दीपलाई आर्थिक रुपमा भने घाटा भएको छ। दिल्लीले रिलिज गरेको खण्डमा उनी अक्सनमा जान पाउँथे जसमा उनको मूल्य करोड बढी हुने थियो। तर दिल्लीले रिटेन गरेसँगै उनले त्यहि मुल्यमा खेल्नुपर्ने हुन्छ।
सन्दीप पछिल्लो समयमा धेरै माग गरिएका खेलाडी हुन्। प्रायः सबैखाले अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्चाइज लिगमा सहभागि भई राम्रो प्रदर्शन गरेका उनी क्रिकेट खेल्न सर्वाधिक देशको भ्रमण गर्ने खेलाडी बनेका थिए। पछिल्लाे समयमा उनले गरेकाे प्रदर्शन र उनकाे क्षमता अनुसार उनी आइपीएलमा महँगो मुल्यमा अनुबन्ध हुन सक्थे। त्याे अवस्था हालकाे लागि टरेकाे छ।
हुन त सन्दीपलाई उनको क्षमता प्रदर्शन गर्ने एक ठाँउ शुरुमा दिल्लीले नै दिएको थियो। आइपीएल खेलेपछि उनकाे चर्चा एकाएक चुलिएकाे थियाे। अक्सनमा जाँदा कहिलेकाँही महँगो मूल्यमा खेलाडी नबिक्ने खतरा हुन सक्थ्यो। तर सन्दीपकाे लागि आर्थिकरूपमा घाटा हुने देखिएपनि एक किसिमकाे खतरा भने हटेकाे छ। जे होस सन्दीपले आगामी संस्करणको आइपीएल खेल्ने पक्का भएको छ।
— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) November 15, 2019